Baiboly pejy 689 - Ny Baiboly
Voalohany < 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 Manaraka Farany
Filemona toko 1 (tohiny)
10dia mifona aminao ho an'i Onesimo zanako naterako teto am-patorana, 11izay tsy nahasoa anao loatra fahiny, fa mahasoa antsika tokoa ankehitriny, dia hianao sy izaho. 12Ampodiko atý aminao izy, ilay sombin'ny aiko. 13Nikasa hihazona azy taty amiko aho, mba hanompo ahy ho solonao, eto amin'ny fifatorako noho ny amin'ny Evanjely; 14saingy naleoko tsy nanao na inona na inona raha tsy teny ierana aminao, mba tsy ho an-tery setra ny asa soanao, fa ho an-tsitra-po tokoa. 15Angamba koa Onesimo no niala vetivety teto aminao, dia ny mba hanananao azy mandrakizay, 16tsy toy ny mpanompo intsony, fa mihoatra noho ny mpanompo, dia tahaka ny rahalahy malala, ho ahy indrindra ary mainka fa ho anao, na araka ny nofo, na araka ny Tompo. 17Koa raha ataonao ho namanao tokoa aho, dia raiso tahaka ny tenako izy; 18ary raha nanao ny tsy marina taminao izy, na nitrosa taminao, dia ataovy ho trosako aminao izany.
22Dia mba anomano trano hitoerako koa aho, fa noho ny vavaka ataonareo dia manantena aho fa haverina aminareo. 23Manao veloma anao Epafrasy, mpiara-mifatotra amiko ao amin'ny Kristy Jesoa, 24sy Marka, sy Aristarka sy Demasy, ary Lioka, izay mpiara-miasa amiko. 25Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika. Amena.
1Fahiny, tamin'ny fotoana sy ny fomba samihafa, dia efa niteny tamin'ny razantsika Andriamanitra, tamin'ny vavan'ny mpaminany; 2fa amin'izao andro farany izao kosa indray, dia tamin'ny Zanany no nitenenany tamintsika, dia ilay notendreny ho mpandova ny zavatra rehetra, sy nahariany an'izao tontolo izao. 3Io Zanany io izay famirapiratan'ny voninahiny, sy mariky ny tenany, ary manohana ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, dia mipetraka eo an-kavanan'ny fiandrianany masina any amin'ny avo indrindra nony avy nanao ny fanadiovana ny fahotantsika, 4ka natao ambonin'ny anjely, arakaraka ny fahambonian'anarana nolovany, fa tsy tahaka ny azy ireo.
5Fa anjely iza no mba nilazan'Andriamanitra hoe: Zanako hianao, izaho no niteraka anao androany? sy ny hoe: Izaho no Rainy, ary izy ho Zanako? 6Ary rahefa mampiditra ny Lahimatoa atý ambonin'ny tany indray izy, dia manao hoe: Aoka hitsaoka azy ny anjelin'Andriamanitra rehetra. 7Ny anjely lazainy hoe: Nanao ny anjeliny ho rivotra izy, ary ny mpanompony ho lelafo; 8fa ny Zanaka kosa ataony hoe: Ny seza fiandriananao, Andriamanitra ô, dia mandrakizay doria, ary ny tehim-pahitsiana no tehim-panjakanao. 9Tia ny fahamarinana hianao, fa mankahala ny heloka kosa, ka nohosoran'Andriamanitra, izay Andriamanitrao, diloilom-pifaliana mihoatra noho ny namanao rehetra. 10Ary izao koa: Hianao, Tompo ô, no nanorina ny tany tamin'ny voalohany, ary asan-tànanao ny lanitra. 11Izy ireo ho levona, fa hianao haharitra; ho tonta toy ny fitafiana izy, 12ary havalonao toy ny lamba, ka hovàna avokoa; fa hianao no tsy miova, ary ny taonanano no tsy ho tapitra. 13Ary iza tamin'ny anjely no nataony hoe: Mipetraha eo an-kavanako, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? 14Moa tsy fanahy manompo va izy rehetra, nirahina hanao fanompoana ho an'izay handova ny famonjena?
14Koa satria mana-nofo aman-drà ny zaza, dia mba naka izany koa izy, handringanany amin'ny fahafatesany ilay manana ny fanjakan'ny fahafatesana, dia ny demony, 15sy hanafahany an'izay rehetra niharan'ny fanandevozana nandritra ny andro rehetra niainany noho ny tahotra ny fahafatesana. 16Na aiza na aiza tsy mba anjely no vonjeny, fa ny taranak'i Abrahama no vonjeny. 17Ka izany no tsy maintsy nanaovana azy mitovy amin'ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra, mba ho tonga be famindram-po izy sy Mpisorona mahatoky ny amin'Andriamanitra, hanaovany sorom-pifonana noho ny otan'ny olona; 18fa noho ny tenany nalaim-panahy sy nijaly indrindra no ahavonjeny izay alaim-panahy koa.
Hebrio toko 3
Ambony mihoatra an'i Moizy izy - Halavirina mafy ny tsy finoana.
1Koa amin'izany, ry rahalahy masina, mpiombona amin'ny fiantsoana ho any an-danitra, diniho ilay Apostoly sy ny Mpisorom-ben'ny finoana arahintsika, dia Jesoa, 2izay nahatoky an'ilay nanendry azy, tahaka an'i Moizy "tao amin'ny tranony rehetra" koa.
Pejy: Voalohany < 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2982 seconds